Izimbozo → Iimpahla ezisebenzayo • I-P & M yobuchwephesha bokuhombisa iikhompyuter
IiOverall zisetyenziswa kumashishini amaninzi, iyantlukwano yazo ibenza balungele izikhundla ezahlukeneyo, zombini apho iiseti ezilahlwayo kunye neplastiki zicetyiswayo.
Isuti inokusetyenziselwa ukutshintshana sweatshirts i ibhulukhwe. Enkosi ngayo, unokukhusela umzimba wonke kunye neempahla zabucala kwizinto ezinobungozi kunye nokungcola.
Ukulungiselela kunye nokuthuthuzela, abavelisi abaninzi basebenzisa izisombululo ezongezelelweyo, ezinje ngezinto ezixhasa isuti ezandleni, ukuyikhusela ekutyibilikeni.
Kwisibonelelo sethu uya kufumana iiovaroli ezigqunyiweyo, Kunye neenguqulelo ezibhityileyo zasehlotyeni kunye iisuti ezizodwa zokhuselo.
Umgangatho ophezulu wezixhobo uqinisekisa ukomelela kweesuti, kodwa kunye nokuhamba komoya okwaneleyo, okuthintela ukubila okugqithisileyo.
Esona sizathu iisuti zomsebenzi Kukukhusela iimpahla ekonakaleni okanye kumabala amdaka, ngelixa injongo yempahla ekhuselayo ikhusela kwimichiza okanye emlilweni.
Singumhambisi we-coveralls zorhwebo 3M, UDupont, uLeber noHollman, uReis yaye resin. Ezinye iiseti ziye zacetyiswa ngeepokotho emadolweni ezivumela ukufakwa kweephedi zedolo zomsebenzi omde ngelixa uguqe ngamadolo. Iindawo zokugquma zenziwe ngemigangatho eqinisiweyo kwezona ndawo zibuthathaka.
Ngenxa yomahluko kumaqondo obushushu asebenzayo, sinikezela iiovaroli zomsebenziezazenziwe ngezinto zomoya ezivumela inkululeko yokuhamba, kuthintela ukubila okukhulu ngexesha lomsebenzi womzimba. Ezi mpahla zilungele ukusebenza kwiiwekhishophu zeemoto, izixhobo zokufakela, iiplumbers kunye nabanye - naphina apho kukho umngcipheko omkhulu wokungcoliseka zizinto ekunzima ukuzihlamba.
Kwicandelo leesuti zasehlotyeni, kukwakho neenguqulelo ezingena uthuli, ezinokugqitywa ngazo iimaski okanye iminqwazi. Izikhuselo zokukhusela zenziwe ngamalaphu akumgangatho ophezulu aqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide. Ukufumana umgangatho ongcono, ezinye iimodeli ziye zaqinisa iiseti zokukhusela ekuqhekekeni nasekukhupheni. Sineemodeli ezineepokotho zefowuni ezithunjiweyo.
Iovalloli yomsebenzi wasebusika Olunye uhlobo kunxitywa iimpahla zakudala ezibandakanya ibhlukhwe kunye noboya begusha. Uncedo lwabo yinguqulelo ekhusela ukungcola phakathi konwebu ngalunye. Enkosi ngokusetyenziswa komxube ofanelekileyo wezinto, awutyebanga kakhulu, kwaye oku kuvumela inkululeko yokuhamba. Iovalloli zasebusika kwisibonelelo sethu zenziwe yinkampani yaseReis.
Isinxibo esigqunyiweyo senziwe ngomqhaphu kunye nokudityaniswa kwepolyester, ekwabandakanya ulungelelwaniso. Umqolo utyebisiwe ngerabha ekhethekileyo yenkululeko yokuhamba okungcono. Ezi modeli zifaneleke kakhulu kwizinyibilikisi, abakhi beendlela, izilinganisi kunye nabasebenzi bokwakha. Izimbozo zomsebenzi zixhotyiswe ngeepokotho ezikuvumela ukuba ugcine ifowuni okanye izinto ezincinci. Ukutsalwa esinqeni nakwimikhono kuthintela ukutsala phezulu ngelixa ushukuma. Ezinye iimodeli zikwanazo neepokotho zeepads zokunciphisa uxinzelelo xa usebenza emadolweni.
Iicall cover ezingalukwanga kunye nezenziwe
Izikhuselo ezikhethekileyo ezivela kwiinkampani ezinje nge-3M okanye iDupont ziyilelwe ukukhusela kwizinto ezinobungozi. Iimpahla ezinikezelweyo zinikezelwe, phakathi kwabanye. ngabapeyinti, abazingeli kunye nabantu abajongene neekhemikhali ezomeleleyo. Ukongeza, ukhuseleko, iisuti ezikhethiweyo ziyafumaneka ngemibala yesilumkiso. Ziyilelwe abantu abasebenza kwiindawo zikawonke-wonke, iimeko ezinzima zemozulu okanye ebusuku.
Iisuti ezizodwa zokhuselo ziyahlangabezana nemigangatho ebekiweyo ebekwe yi-European Union kwiisuti zokukhusela. IiOverall ezinikezelwe kwiimeko zokusebenza ezinzima zikhusela kwizinto zemichiza, izinto ezinemitha yeathom, uthuli kunye namasuntswana aqhumayo. Izixhobo ezongeziweyo ezineziphu zenza kube lula ukunxiba.
Umsebenzi weAllegroovaroli bomsebenziiiovaroli enyeiovaroli zomsebenzi wamadodaiiovaroli ezingangeni manziiiovaroli zomsebenziumsebenzi overalls AllegroIiovaroli zomsebenzi weAudiovaroli bomsebenziI-overdiyia yaseGdyniaiiovaroli enyeUmsebenzi we-Krakow ovaloliiovaroli zomsebenzi wamadodaiovaroli zomsebenzi ezigqunyiweyoI-OLX yokugubungela umsebenziiiovaroli zomenziiisuti zomsebenzi wokuweldaiiovaroli ezisetyenzisiweyoIovaroli zomsebenziiiovaroli ezinoprintaiiovaroli zomsebenzi wasebusikaiiovaroli zomsebenzi wokukhuselaUmsebenzi okhuselayoixabiso elincinanana lomsebenzi wokufihlailaphu lomsebenzi wokugubungelaiimpahla zokunxiba iiovaroliwasebenzisa iiovaroli zomsebenzi
5 / 5 ( 12 iivoti )